Kuurida Waqooyi oo Tijaabisay Labo Gantaal Oo Ridada Dhexe ah • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / World News / Kuurida Waqooyi oo Tijaabisay Labo Gantaal Oo Ridada Dhexe ah
Kuurida Waqooyi oo Tijaabisay Labo Gantaal Oo Ridada Dhexe ah
Waqooyiga Kuuriya ayaa maanta oo Sabti ah tijaabiyay labo gantaal oo nooca ridada dhexe ah, sida laga soo xigtay milateriga Koonfurta Kuuriya.
Tijaabada gantaalahan oo lagu ganay dhinaca badda ayaa noqonaysaa middii 5aad oo ay muddo labo toddobaad gudahood ay saymayso dowladda waqooyiga Kuuriya. Tijaabadan ayaa jawaab u ah dhoolatuska militari oo ay sida wadajir ah u wada sameenayaan dalka ay jaarka yihiin ee Kuuriyada koonfureed iyo Maraykanka.
Saraakiisha Difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in waqooyiga Kuuriya ay gantaalaha ka ganeen meel u dhow magaaladda Hamhung ee waqooyiga dalkaasi, gantaalahan oo masaafo ahaan Jaray 400km, joog ahaan 48km, ayaa ku burburay bada u dhaxaysa gacanka Kuuriya iyo Jaban.
Dowladda Waqooyiga Kuuriya weli kama hadlin tijaabadan u dambaysay ee ay Sameeyeen. Hase yeeshee waxay ku soo beegmaysaa saacado yar ka hor markii Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay in warqed qurux badan ka helay dhigiisa waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un.